This concludes buy bitcoin our program and we strongly recommend your continued support for our partner, Myanmar Book Aid and Preservation Foundation. MBAPF’s directors, Drs. Thant Thaw Kaung and May Moe New, carry on as they had done the past seven years in supporting village, town and outlying city libraries with donated books, computer and internet training, and […]
ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရုံး (၁၄-၁၀-၂၀၁၆ )ရက် ကလေးစာဖတ်ခန်းတွင် ကလေးများစာဖတ်ခြင်း Tabletများကို Wifiဖြင့်ချိတ် ဆက်၍ အင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်း ဂိမ်းဆော့ကစားခြင်း တို့ကို လာရောက်အသုံးပြုနေစဉ် ... See MoreSee Less
မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ပြီး Action, People, Process @
Idea အုပ်စုများခွဲခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးစာကြည့်တိုက်ခေါင်းဆောင်(၃)မျိုး
15-10-16 : 0900-1200 @ တန့်ဆည်သင်တန်းကျောင်း ... See MoreSee Less
လောက၌ ပန်းပဲကောင်းလက် မရောက်ရသဖြင့် ဓားကောင်းမဖြစ်ရသော သံကောင်းတွေများစွာရှိပါသည်။အိပ်မက်သစ်သည် သိမ်ဇရပ်ရှိ အနာဂတ်လူငယ်များကို ထိုသို့အဖြစ်မခံနိုင်ပါ။
အသိညဏ်ဖြန့်ဝေခြင်း ကူညီတတ်ခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နားလည်မူရှိခြင်း ကိုယ်ကျင့်တရားအလေးထားခြင်း ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ခြင်း စသည်အရည်အသွေးတွေ သိမ်ဇရပ်ရှိလူငယ်တွေးမှာ ကိန်းအောင်းသွားစေဖို့တွက် အိပ်မက်သစ်မှ ကြိုးစားသွားပါမည်။14.10.2016 ... See MoreSee Less